Izici zesimo sezulu: konke odinga ukukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo sezulu sesifunda siyisethi yokuguquguquka kwesimo sezulu esisebenza ukwakha isimo esithile semvelo. Kuningi izici zezulu ezisebenza ngasikhathi sinye ukuze zikwazi ukunikeza lezi zici endaweni. Izinto eziguquguqukayo ezisebenzayo azitholakali kuphela ezingeni lomkhathi kepha zithinta nawo wonke amazinga okuphakama ukusuka ebusweni bomhlaba. Khumbula ukuthi i-troposphere ungqimba lomkhathi owenza isimo sezulu emhlabeni. Ngaphezulu kwale troposphere akukho mehluko obalulekile phakathi kwezindawo.
Kule ndatshana sizohlaziya ukuthi yiziphi izici nezinto ezahlukahlukene zesimo sezulu.
1 Ukubaluleka kwezimo zezulu
2 Izici zesimo sezulu
2.1 Ukuphakama nobude
2.5 Ingcindezi yasemkhathini
3 Izici zesimo sezulu: amafu, imisebe yelanga
Ukubaluleka kwezimo zezulu
Kunabantu abaningi abadida isimo sezulu, isimo sezulu. Uma sikhuluma ngesimo sezulu asibhekisisi kulokho okwaziwa njengesimo sezulu. Okusho ukuthi, uma namuhla noma kusasa lizokuna, kuzoba nelanga, umoya onamandla, amazinga okushisa aphezulu, njll. Kulokhu iqoqo lezimo zezulu ezingenzeka nganoma yisiphi isikhathi yilokho okubizwa ngokuthi yi-meteorology. Ngakolunye uhlangothi, uma siqhubeka nokuqopha zonke lezi zimo zezulu kanye namagugu eziguquguqukayo lapha aqubule lezi zimo ngokuhamba kwesikhathi, sizoba nomphumela wesimo sezulu sesifunda.
Ngalesi sizathu, siyaqinisekisa ukuthi isimo sezulu siyisamba sokuguquguquka kwesimo sezulu okwenzeka ngokuhamba kwesikhathi nasesikhaleni. Zonke lezi zinto eziguqukayo namanani azo yilokho okunikeza izici zesimo sezulu endaweni ethile. Isibonelo, amazinga okushisa aphakathi nendawo akhona esifundeni esithile seplanethi yikho okuphawula ingxenye yalesi simo sezulu. Ingabhekwa njengezindawo ezifudumele, ezipholile noma ezibandayo ngokuya ngamanani wokushisa aphakathi nendawo. Esinye sezibonelo eziphawuleka kakhulu endaweni yethu isimo sezulu saseMedithera. Lesi simo sezulu sibonakala kakhulu ngokuba namazinga okushisa aphezulu ngenkathi yasehlobo nobusika obubanda nobumanzi. Ngisho, lezi zinhlobo zezulu imvula igxila ezinyangeni zasebusika ngenkathi ihlobo selomile.
Kubalulekile ukujoyina idatha yesimo sezulu kanye nokucacisa izilinganiso eziphelele ezisuka kumanani wezinto eziguquguqukayo ezakha isimo sezulu. Yonke eminye idatha ekude kakhulu nencazelo imvamisa ayisetshenziselwa ukuthola leli nani elijwayelekile. Cishe kuzo zonke izindawo kunamanani aphakathi kwemibuso yomoya, izinga lokushisa, imvula, imisebe yelanga, njll.
Njengoba sishilo phambilini, uchungechunge lokuguquguquka kwesimo sezulu yilokho okunikeza izici kwisimo sezulu sendawo. Lezi zimo zezulu zimi kanje: ukuphakama nobude, ukuthambekela kwendawo, amanzi, imisinga yolwandle, izinga lokushisa, imvula, umswakama, ingcindezi yasemkhathini, amafu, umoya nemisebe yelanga. Njengoba ukwazi ukubona, kunezici eziningi zesimo sezulu futhi amanani azo angashintsha ngokuqhubekayo. Zonke lezi zinto ziyangenelela ngandlela thile.
Isibonelo, akulona inani elilinganayo lemisebe yelanga elingashaya ngokunqophile emgqeni wezindawo ezishisayo nenani lemisebe yelanga efinyelela ezigxotsheni. Ukuthambekela kwemisebe yelanga yikhona okunquma inani lemisebe yelanga ezofika. Ngokuya ngalokhu, amanani wokushisa asunguliwe. Lesi yisizathu esenza ukuthi izigxobo zibe nokushisa okujwayelekile okungaphansi kakhulu kunendawo yezindawo ezishisayo.
Amandla enza indawo yomhlaba ashise umoya ozungezile akufani endaweni yonke yomhlaba. Kungashiwo ukuthi ukuphakama nobubanzi kuthonya kakhulu. Sizohlaziya izici ezahlukahlukene zesimo sezulu nokuthi zithinta kanjani izici zayo.
Ngokuya ngobude lapho sikhona nobubanzi kufanele sazi ukuthi amazinga okushisa azohluka ngaphandle kokunye ukuguquguquka kwesimo sezulu. Ngamamitha ayi-100 wonke esiwenyuka phezulu, izinga lokushisa lehla ngo-3 degrees Celsius. Ngalokhu kukhuphuka kokuphakeme futhi siyabona ukuthi ingcindezi yasemkhathini iyenzeka kanye nezinga lokushisa. Lokhu okuguqukayo okubili, njengokushisa kanye nengcindezi yasemkhathini, kwenza izimo zezemvelo zithandele olunye uhlobo lokuthuthuka kwempilo.
Isibonelo, kunenani elikhulu lezimbali nezilwane eziye zakhula futhi zajwayela lolu hlobo lokuphakama. Kulezi zindawo kunokuntuleka kokudla, uhlaza oluncane, umbuso womoya ophakeme, njll. Lezi yizimo ezingakusizi nhlobo ukuthuthukiswa kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo.
Ithempelesha iyona eguquguqukayo ebaluleke kakhulu emhlabeni jikelele. Yiyo ebeka kakhulu izimo zentuthuko yempilo. Izinga lokushisa kufanele libe nenani elisebangeni elidingekayo ukuze impilo ikhule futhi nezinhlobo zezilwane zikwazi ukuhlala kuleyo ndawo. Ekuguqukeni kokushisa lkuthinta amafu, umoya, imvula, ingcindezi yasemkhathini, inani lemisebe yelanga efinyelela ngaphezulu, Njll
Lokhu kusho ukuthi ukuguquguquka okukodwa komkhathi akunanani eliphelele, kepha kuzothinteka ngezinye izici zesimo sezulu.
Imvula ifingqiwe njengomthombo wamanzi endaweni nokugcinwa komswakama wendawo. Ngenxa yemvula, uhlaza lungachuma futhi nalo lonke uchungechunge lokudla. Imvula yenzeka kuye ngamazinga okushisa, inani lemisebe yelanga, ikhava yefu, ingcindezi yasemkhathini, njll. Njengoba sibona, asikho isici sezulu esingalungiswa ngomunye.
Umswakama inani lomhwamuko oqukethwe emoyeni. Kunqunywa yi umbuso wemvula wendawo, izinga lokushisa, umoya, phakathi kwabanye. Lapho indawo inemvula ethe xaxa futhi kunomoya omncane, kulapho umusi wamanzi ungabamba umoya.
Kungamandla asebenza emoyeni kithina nasemhlabeni. Kuchazwa njengokucatshangwa ngumoya. Njengoba sishilo ngaphambili, njengoba ukhuphukela phezulu, ingcindezi yasemkhathini iyancipha.
Izici zesimo sezulu: amafu, imisebe yelanga
Kulokho esihamba khona lezi zinto ezintathu zezulu ngoba yizona ezihluka kakhulu ebusweni bomhlaba. Inani lamafu ku-troposphere nganoma isiphi isikhathi liyinto yesimo sezulu ethonywe yimvula, inani lemisebe yelanga efinyelela phezulu kanye nomswakama wemvelo.
Umoya ukuhamba komoya futhi kunquma ukuguquguquka kwesimo sezulu njengomswakama wezemvelo, izinguquko ekucindezelekeni komkhathi futhi kube nomthelela ekuhwamukeni kwamanzi. Ukuhwamuka kwamanzi kungenye yezinto ezibalulekile zomjikelezo wamanzi.
Imisebe yelanga ingenye yezinto eziguqukayo ezingashintsha kakhulu ukusuka kwenye indawo kuye kwenye. Yiyo enikeza ngamunye indawo yomhlaba nomoya kanye namafu ngokuvamile agcinwa amagesi abamba ukushisa.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezimo zezulu nokuthi zisebenza kanjani kuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Izici zesimo sezulu